Somali / 4-3-2020
Subject line: Wargalin muhiim ah oo ka socota Iskoolada Cherry Creek
April 3deeda, 2020
Gacaliyayaal Bulshada Degmada Cherry Creek ,
Waxaan idiin soo qorayaa inaan idiin sheego inaad ogaataan in Iskoolada Cherry Creek ay sii wadi doonaan barashada fog ee internedka inta ka harsan sanad dugsiyeedka 2019-2020 - dhismayaasha iyo xarumaha way sii xirnaan doonaan. Go'aankan adag waxaa loo sameeyey si loo ilaaliyo caafimaadka iyo ladnaanta ardayda, shaqaalaha, qoysaska iyo bulshada. Waxaa la sameeyay ka dib markii lala tashaday Gudiga Waxbarashada, wakaaladaha caafimaadka dadweynaha ee degmada iyo gobolka iyo degmo dugsiyeedyada kale ee degmayaasha.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan diiradda saarno oo aan hagaajino nidaamkeena waxbarashada fog ee internetka, si aan u hubino in dhamaan 55,000 bartayaasha ah ay helaan khibrado waxbarasho oo tayo sare leh ilaa dhamaadka sannad dugsiyeedkan. Todobaadkii ugu horeeyay ee barashada fog ee internetka ma ahayn caqabad la'aan, laakiin waxaa jiray waxyaabo badan oo wanaagsan sida ardayda iyo macallimiintii oo dib isugu soo noqday si ay u sii wataan waxbarashadoodii.
Waan ogahay inaad qabtaan su'aalo badan oo la xiriira go'aanka xiritaanka dugsiyada. Waxaan idiin hayaa jawaabo bilow ah hada, qaar kalana way soo socdaan maalmaha iyo todobaadyada soo socda.
Hawlaha Dugsiga – Dhamaan hawlihii shaqsiga ahaa ee ka socday iskoolada inta ka harsan sanad dugsiyeedkan waa la joojinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta waalidiinta iyo PTO-yada iyo PTCO-yada hogaankooda arrintan iyo dadaalkooda ay ku ilaalinayaan ardaydeena, shaqaalaheena iyo qoysaskoodaba inay ahaadaan amaan.
Qalin Jabinta – ma qaban doonno xafladihii qalin-jabinta bisha May sidii markii hore la qorsheeyay, laakiin waxaa iga go'an inaan helo hab aan ugu dabaaldegno guulihii qalin-jabinta ee Fasalka 2020, marka la helo sida ugu haboon ee nabad ah .
Alaabta ardayda ee dugsiyada taala – Waxaan u sameyn doonaa hanaan ay ardayda iyo qoysasku ay ku soo qaataan alaabtooda taala dugsiyada , mar la helo waqtiga ugu haboon.
Barnaamijka Cunada Bilaashka ah - Barnaamijkeena cuntada bilaashka ah wuxuu sii soconayaa ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedkan, laakiin taariikhaha iyo meelaha qaarkood way isbedelayaan, laga bilaabo Isniinta, Abriil 6deeda. Quraacda iyo qadada bilaashka ah iyo yaa wali la siin doonaa ardayda 18 iyo kuwa ka yar. Isniinta, Arbacooyinka iyo Jimcaha 10 meelood oo degmada ka mid ah. Ardaydu waxay heli doonaan cunno ku filan labo maalmood Isniinta iyo Arbacada. Faahfaahin dheeraad ah ka fiiri halkan https://www.cherrycreekschools.org/freemeals.
Caafimaadka iyo Ladnaanta - Talaadada waxaan bilawnay CCSD HealthLine, oo ah adeeg lacag la’aan ah oo lagu taageerayo ardaydeena caafimaadkooda jir ahaan iyo maskax ahaanba. Qoysaska CCSD waxay soo wici karaan 720-554-4584 si ay ugu xirnaadaan kalkaaliyaha caafimaadka ee iskoolka ama xirfadle caafimaadka dhimirka. Khadku waxaa la heli karaa 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha inta ka hartay sannad dugsiyeedkan. Faahfaahin dheeraad ah fiiri halkan https://www.cherrycreekschools.org/healthline.
Sida idinkoo kale, waxaan aad uga xunahay inaan ku qasban nahay inaanan waji-ka-waji waji isku arkeeynin ardayda iyo macalimiinta inta ka harsan sanadkan, oo ay weheliso waxqabadyo badan iyo munaasabado dugsiyada ka dhigi lahaa mid macno leh. Laakiin duruufaha aan caadiga ahayn waxay u baahan yihiin talaabooyin aan caadi ahayn. Waan ogahay in bulshada iskoolada cherry Creek ay ka bixi ka raan caqabadaha horyaal.
Badbaado iyo. Caafimaad qab